musha UNITED UMAMBO FOOTBALL STORI Vatambi Vanotamba Yevatambi Ashley Barnes Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius ine zita rekuti “Barney". Yedu Ashley Barnes Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ashley Barnes Nyaya Yehucheche Nyaya- Iyo Ongororo Kusvikira. Credits kuti BBC uye DailyMail
Kuongorora kwacho kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, hupenyu hwebasa repakutanga, mugwagwa wekurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwomunhu, mararamiro, hupenyu hwemhuri uye chokwadi chisina kutaurwa.
Ehe, munhu wese anoona Barnes semutambi iyeye akagadzira mukurumbira wekuputira vanopikisa uye kurova zvinangwa zvikuru. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Ashley Barnes 'biography iyo inonyanya kufadza. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Wese munhu anomuziva saAshley Barnes ASI mazita ake akazara ndiAshley Luke Barnes. Barnes akazvarwa pazuva re30th munaGumiguru 1989 muguta reBath, United Kingdom. Iye akaberekerwa kuvabereki vechiRungu vane vasiri veBritish Mhuri midzi. Barnes ane Mhuri yake anobva kuAustria. Waizviziva here? Babamukuru vake baba vake vanobva kuKlagenfurt, guta riri kumaodzanyemba kweAustria.
Ashley Barnes akakurira muBath, guta rakakura muEngland rinozivikanwa nekuda kwaro rekugezera rakavakwa neRoma uye nzvimbo dzakanaka dzeRoma dzekuchera matongo. Izvi zvinogona kutsanangura chikonzero nei sekuru vaAshley Barnes vakasiya nyika yavo yeAustria kunogara muguta reChirungu.
Ashley Barnes anotya kubva kuBhati- Guta muEngland. Chikwereti kuLuxuryTraveladvisor neIzwiAtlas
Mishumo yaAshley Barnes yehupenyu hwepakutanga hunoratidza kuti iye haana kurerwa mumhuri yepakati-kumashure mhuri. Ainge asingafarire pakuona kwekuchera matongo, bhora chete. Ashley Barnes vabereki vaive vakaita sedzemhuri zhinji muBath vaikwanisa inokwanisa kuunganidza mitsva yematoyi emwanakomana wavo, kusanganisira nhabvu.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kuve nemubereki anoda bhora, zvaingoitika kuti Barnes adanane nemutambo uyu wakanaka. Izvi zvinosanganisirawo iye achirota kuti ave mutambi wenhabvu.
Ashley Barnes kutanga kutora chikamu munhabvu kwakauya panguva yake yepuraimari. Kare ikako, vabereki vake vakamunyoresa kuWhititington Chikoro chiri mumusha weDunkerton pedyo neBath, England. Kuchikoro, Ashley akatanga kufarira kutamba nhabvu yemakwikwi.
Ashley Barnes Dzidzo uye Basa Rekuvaka. Chikwereti kuGoogleMaps
Ari kure nechikoro, Barnes akaramba achitamba nhabvu aine chivimbo, achigadzira tsika yekuwandisa mucherechedzo wake uye kuita zvinhu kunze kwebhuruu nebhora renhabvu. Izvi akazviita kushamisika kweshamwari dzake nehama dzemhuri.
Ashley Barnes aine chinangwa chakakwirira semwana uye kutsunga kwake kuve nyanzvi yebhola bhora raisava fungidziro iri kupfuura. Kuzviisa kubasa, akafunga kuenda kuCherwood Drive iri muSomerset County kunopinda muedzo wenhabvu naBath Arsenal Juniors.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Achiri mwana, Barnes akazviona achipfuura Bath Arsenal Juniors academy miedzo uye kubudirira kunyoresa mukirabhu. Bath Arsenal Juniors Nhabvu, kunyangwe isiri yakabatana neGunners inhabvu yenhabvu ine zvikwata zvevana veese mazera evechidiki.
Paaive kuchikwata cheBat Arsenal, Ashley Barnes akasangana nevamwe vaaifamba navo Scott Sinclair uyo akatendeukawo nyanzvi. Pamwe chete, vakomana vaviri ava vaive nenguva yavo yakanaka Sinclair asati aenda kunobatana naBristol Rovers aine makore mapfumbamwe.
Ashley Barnes Upenyu hwepakutanga naBhati Arsenal. Chikwereti kuna IG
Pakutanga, zvese Ashley aida kwaive kusvika pamusoro penhabvu yeChirungu. Mumashoko ake:
“Mazuva ese pandakamuka, ndaifanira kuzvinyudza. Kurota kuva pro kwakanaka uye kwakarota zuva nezuva pandakanga ndiri mudiki. "
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Ashley Barnes akatanga basa rake repamusoro senzira yekuronga zvibodzwa naPaulton Rovers, kirabhu yemuno inowanikwa muChirungu Southern League. Young Barnes akafananidzirwa pazasi aive mune imwe yakaderera ligi muChirungu yeBhora yeNhabvu League System.
Ashley Barnes Upenyu hwepakutanga neSekuru Bhora. Kiredhiti kune BBC uye Dave Rowntree
Ashley Barnes akanyanya-kuyerwa pamakore ake ekutanga ebasa. Akatanga kugashira zvakanaka kwazvo kubva kumakirabhu makuru muEngland vakuru ligi. Izvi zvakaratidza rwendo rwake kubva kuSouthern League kuenda kumusoro kweiyo English League System- Iyo Premier League.
Ashley Barnes akadzidza nzira yakaoma nezvikwereti zvinowanikwidza kuOxford United, Salisbury City, Eastbourne Borough, Torquay United uye Brighton Hove Albion. Imwe neimwe yeaya mabhureki echikwereti akaiswa nekuve nenguva shoma yekufadza maneja ake. Waizviziva here? Iye akapfuura uye akapwanya nepakati akaderera chikamu chechirungu ligi system kuburikidza neLoan inoperetera kusvika kumusoro chaiko zvese muzita rekuve munhu anotanga-kusarudza mutambi.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Ashley Barnes akawana chaaida, icho chiroto chekuve mutambi-sarudzo yekutaurisa kirabhu yaizomupa chibvumirano chechigarire. Zvese zvakanyatsoitika mumwaka we2011-12 apo paakabatsira Brighton kudzokera kuChampion achipedzisa seanotungamira mapoinzi aine 14 zvinangwa mumakwikwi ese.
Pa 10 Ndira 2014, performance yaBarnes yakamuona achibvutwa naBurnley mubhadharo usingazivikanwe. Mumakore mana chete, chaizvo pa3rd yaMarch 2018, akazvinyora mumabhuku enhoroondo yekirabhu paakazova mutungamiriri weiyo kirabhu muEPL kubva pakaumbwa 1992. Senge panguva yekunyora, Barnes akawana mukurumbira wekuputira vese vapikisi vakuru kana vadiki muzvinangwa zvake.
Ashley Barnes achipemberera one zvinangwa zvake.Credit to PremierLeague
Kunyangwe iye angave asiri padanho re Sergio Aguero, asi yeBurney mafeni, tiye ndangariro dzeiyo yakakosha nhamba 10 ichagara ichirangarirwa. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Kumashure mebudiriro yeRungu rebhola, kune musikana akanaka anonzi Zan Barnes uyo asinganyanyo kuzivikanwa nezvake. Vose Barnes naZan vakaroora uye vakagara pamwe chete kwenguva yakareba. Pamwe chete, vane mwanakomana anonzi Flynn akaberekerwa mu2011.
Sangana naAshley Barnes Mwana- Flynn Barnes
Flynn anogona kunge akatenderedza makore e2 panguva yaaipfeka makore iwayo eBrighton ne8 sep panguva yekunyora chinyorwa ichi.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva hupenyu hwaAshley Barnes kwaizokubatsira kuti uwane mufananidzo uzere iye. Nguva akatiita kuti tinzwisise kuti Barnes ndeyepasi pasi munhu ane mutsa kwazvo kune vaaibata navo. Ash-Cabs, sezvo achidanwa kuti mutakuri wevanhu uye mutungamiri anowana mufaro mukubatsira vamwe vake vechikwata nezvekufambisa.
Haisi yakajairika Premier League chiitiko kuona kumusoro bhasiketi saBarnes vachiita kabati basa. Barnes zvakadaro, anowanzofamba achipinda muBurnley park park kunzvimbo yekudzidziswa nekirabhu nevamwe vaaidzidza navo mukirabhu. Heino nhoroondo yeiyo fan ne fan;
Kana magonhi evapfuura achidirana, ndakaona vafambi vanomwe vachisimuka, mumwe neumwe. Ipapo gonhi remutyairi rinovhura nekubuda rinowana Ashley Barnes, wavo anotungamira zvinangwa uye mutyairi akasarudzwa.
Pakutanga, Barnes aityaira motokari yakangwara, asi akazokwidziridzira kuenda kune minibus sekuonekwa pazasi. Akazviita nekuda kweavo vaitamba navo.
Ashley Barnes LifeStyle Chokwadi. Chikwereti ku AutoEvolution
Ichi ndicho chikonzero nei mutungamiri wemweya weBurnley FC achitumidzwazve kuti "Ash-Makati.. Burnley vafambi venhabvu vanoungana panzvimbo yekumhara muCheshire mambakwedza pamberi pemutungamiriri wavo uye No10 vasvika kuzovatora.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
VaBarnes vane nhengo dzemhuri dzinogara zvakanyanya muBritain neAustria. Nepo munhu wese achitarisira kuti mhuri yake yepedyo vese vangave vanofarira Burnley, zvakapesana ndizvo zvazviri. Ashley Barnes mwana waFlynn is a great man Man City fan.
Anoridza Burnley Ashley Barnes akambotaura kuti akavimbiswa kuwedzera kukurudzira na Jurgen Klopp kuburikidza neSMS iye anokanda mhosva kuManchester City nekudaro achipamba zita ravo remusoro tariro.
Waizviziva here? Flynn haana kufara paakanzwa izvi. "Iye akati kwandiri, 'Huya baba, usave wakasimba !!.' Ndati kwaari… 'Ndine hurombo mwanangu, ndinofanira kuita basa rangu.'
Nechemumoyo, Barnes haana kuita chero chinhu chakavhara mukombe weligi mumutambo weLiverpool. Kana akadaro, angadai aine mukomana asina kunyatsomirira akamirira kuti adzoke kumba kuzoshamwaridzana.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Kune mumwe munhu akamboperekedza mota yaSmart mukudzidziswa mazuva ese, asi akasimudzira kuti kune minibus, zviri nyore kufunga kuti Barnes anorarama hupenyu hwakareruka. In nyika yemazuva ano yenhabvu yemotokari dzekunze uye yekushambadzira midhiya, Barnes zvakangoita Ngolo Kante mushonga unozorodza.
Ashley Barnes LifeStyle Chokwadi. Chikwereti ku AutoEvolution. Kiredhiti ku Auto Auto Shanduko uye Nguva
Sezvineiwo muna Kurume 2018, munhu anorova akawana muhoro we2.4 Million Euro (2.0 Million Pound) pagore. Kuchova izvo mumari inowanikwa panguva, zvinoreva kuti Ashley Barnes anowana $ 5,632 pazuva uye £ 235 paawa, £ 3.91 paminiti uye £ 0.07 pamasekondi. Kunyangwe achiwana izvi zvakanyanya, Barnes anonamata nezvekutarisira mari yake.
Ashley Barnes Nyaya Yevechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
GOTI RAKABHABHATIDZWA KISSING PITCH: Ichi chiitiko chakaitika pa13th yaApril, 2019. Rakanga riri zuva Ashley Barnes akagadziriswa mune izvo vateveri venhabvu vanoreva nezve "inonyanya kunetseka yemamiriro ezvinhu". Ona zvaakaita pazasi.
Ashley Barnes Untold Chokwadi- Iyo Unor Orthodox Bookings. Chikwereti kuSportsBible. Kiredhiti MitamboBible
Waizviziva here? He yakaverengerwa nereferenzi yekutsvoda mutsivi anonzi Joe Bennett panguva yemutambo wakatarisana neCardiff City. Vatambi vese vari vaviri kuve nekupindana mune yekutanga hafu yekumisa nguva iyo yakapotsa yaita kurwa. Panzvimbo pokusimudza musoro wake akananga kuBennett, Barnes akafunga kuratidza rudo nekumutsvoda.
KUDZVANYA RUFUKO: Pa 9 Kurume 2013, Barnes akagamuchira kadhi dzvuku munguva yekumira achipesana neBolton mune izvo zvainzi zvinoteedzana zvisingaite. Akave nekubudirira kuyedza kukwidza mutambi.
Ashley Barnes akaverengera kubhururuka kuna Referee. Chikwereti kuDailyMail
Izvi zvaionekwa semhosva hombe neChirungu FA iyo yakamupa ban-mechi manomwe. Kumafaro evateveri vake, Barnes akadzoka kubva pakurambidzwa kwe20 Kubvumbi akarova zvibodzwa zviviri mumakwikwi e6-1 akakunda Blackpool. Akatumidzwa zita remurume.
MUNOGONA KUDZIVISA ZVINOGONESESESESA ZVESE ZVAKAITWA: Hazvina mumwe munhu kupfuura Virgil van Dijk, chete mudziviriri mumwe waanoti akaramba asingazivikanwe neunyanzvi hwake hwese.
Ashley Barnes anoona Virgil van Dijk semudziviriri waToughest waakambotarisana naye. Chikwereti kuBurnleyExpress
Nemashoko ake: "Virgil van Dijk ndiye munhu anonyanya kubata wandakauya kuzopesana nebasa rangu. Ndiye chete wandinaye wandisina parutivi pazvo. Iye nzira yekusimba uye anesimba. Virgil muchina, "Akadaro Barnes.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Ashley Barnes yeChikoro Chemwana nyaya pamwe ne Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Daniel Sturridge Utano Nhau Plus Untold Biography Facts